Nafta bukaanka oo halis ku sugan kalkaaliyayaal caafimaad la’aan awgeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Therese Edin/Sveriges Radio
Nafta bukaanka oo halis ku sugan kalkaaliyayaal caafimaad la’aan awgeed
La daabacay onsdag 26 februari 2014 kl 14.47
Dadka bukaanka ah oo laga qalay sinta ama xammeytida ayaa khatar weyn ugu sugan in ay geeriyoodaan maadaama ay kalkaaliyaasha caafimaad ee la shaqeeya ku badan yihiin dadka bukaanka u baahan. Sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasad yrybiyaan ah oo lagu soo daabacay wargeyska toddobaadlaha ah The Lancet oo ka soo baxa dalka Ingiriiska. Lisa Smeds Alenius oo iyada qudheedu ah kalkaaliye caafimaad ayaa ka mid ahayd dadkii daraasaddaan ka soo shaqeeyey.
- Markii hal qof bukaan ahi ku soo kordho dadka bukaanka ah oo halkii kalkaaliye caafimaad daryeelo waxaa boqolkiiba toddobo kordha in la dhinto.
Waxa laga hadlayaana waa daraasad weyn oo ay khubaradu muddo darseysey in kor u dhaaftay 26 000 oo kalkaaliye caafimaad iyo 400 000 oo qof oo ah bukaan laga qalay jilibka ama kalagoyska sinta.
Waxaa jira waddamo qaar ah oo horay sharci looga dhigay in halkii kalkaaliye caafimaadba ay ku soo aaddo ugu badnaan lix qof oo bukaan ah. Balse Lisa Smeds Alenius ayaa sheegtay in ay adag tahay in la qiyaaso inta qof oo bukaan ah oo halkii kalkaaliye caafimaad ku soo aadi kara iyadoo aysan waxyeelo gaarin ammaanka bukaanka.
- Waxaan qabaa in ay aad u adag tahay in xad loo sameeyo tirada bukaanka. Waxayna ku xirnaan kartaa arrimo kale duwan oo ay ka mid yihiin baahida daryeelka loo qabo iyo sida ay tahay xaaladda qaybta isbitaalka qofka bukaanka ahi ku jiro.
Sidaas oo ay tahay ayey haddana Lisa Smeds Alenius qabtaa in tirada laga helay qoraalada iswiidhishku soo gudbiyey ay yihiin kuwo aan macquul ahayn.
- In halkii kalkaaliye caafimaadba ay ku soo aaddo ilaa 25 qof oo bukaanka ah habeen walba. Aad ayey u adag tahay in la fahmo sida ay caqligal ku noqon karto.
Natiijada daraasadda waxaa ka muuqata in bukaanka ku jira qaybaha isbitaalka oo ay kalkaaliyayaasha caafimaadku ku yar yihiin ama ay waxbarashoodu hooseyso ay khatar dheeraad ah ugu sugan yihiin in ay geeriyoodaan.